शिल्पा किन रोइन् ? यसबारे केकीको मन छुने र उत्प्रेरक स्तातास ! (पूरा पढ्नुहोस्) – ईमेची डटकम
काठमाडौं, २९ असार । नायिका शिल्पा पोख्रेल र निर्माता छबीराज ओझाबीच केहि दिन अघि महानगरीय प्रहरी प्रभाग टेकुमा सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा दुवैले हस्ताक्षर पनि गरेका छन् । यत्ति नै बेला फिल्म वृतमा भने शिल्पाले खेपेको घरेलु हिंसाको बहस तिब्र भईरहेको छ ।
कलाकार र कलाकर्मी शिल्पालाई अन्याय भएको भनिरहेका छन् । नाम नै राख्न नसके पनि कलाकार हरु कोही शिल्पा त कोही छबीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । यस्तैमा शिल्पाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर निस्के पछी मिडिया समक्ष मैले जे भोगेकी छु, जे सहेकी छु, मलाई मात्र थाहा छ भनेर रोएकी थिईन । यसै प्रसँगलाई लिएर नायिका केकी अधिकारीले उनी किन रोईन भन्ने प्रश्नको जवाफ स्टाटस मार्फत दिने कोशीसदिएकी छिन् ।
केकीले शिल्पालाई एक प्रतिनिधि पात्रको रुपमा उभ्याउदै समाजमा घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भएका सम्पूर्ण महिलाहरुलाई आफुमाथि भएको हिँसाविरूद्ध बोल्न आँट गर्न पनि आव्ह्वान गरेकी छन् । केकीको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै तल हेर्नुहोस्-